Degso Opera loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (70.40 MB)
Opera waa biraawsar internet beddel kale ah oo ujeedkiisu yahay in lagu siiyo dadka isticmaala khibradda internet-ka ugu dhaqsaha badan uguna horumarsan iyada oo la cusbooneysiiyay mashiinkeeda, istcimaalka isticmaalaha iyo astaamaha.
Soo Degso Opera
Ku xoojinta kaabayaasheeda Chromium iyo Blink si ay u ilaaliso booskeeda ka mid ah daalacashada bogagga ugu caansan, Opera hadda waxay leedahay astaamo u babac dhigi kara Chrome, Firefox iyo Internet Explorer ee suuqa biraawsarka.
Markii aad rakibto oo aad ku maamusho Opera kombiyuutarkaaga markii ugu horreysay, waxaad si toos ah u ogaan kartaa isbeddelka, astaamaha cusubna way na sugayaan isla marka aad furto biraawsarkayaga. 3 tab oo kala duwan oo loo yaqaan Quick Access, Dashboard iyo Discover ayaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo khibrada internet ee isticmaalayaasha.
Thanks to menu-ka deg-degga ah, waxaan kala sooci karnaa degellada aan booqanno inta badan iyadoo la raacayo rabitaankeenna, waxaanna ku heli karnaa degelladaan hal guji mar kasta oo aan doonno.
Thanks to tab kale oo loo yaqaan Dashboard, waxaan geli karnaa degellada aan jecel nahay, ku raaxeysanno ama aan dooneyno inaan mar dambe daalacno, oo aan marin u helno mar kasta oo aan rabno hoosta qaybtaan.
Ugu dambeyntiina, waad ku mahadsan tahay Baadhitaan, tab kale oo dhowaan la kulmay dadka isticmaala, waxaan ka heli karnaa wararkii ugu dambeeyay ee ay daabacaan degellada caanka ah ee adduunka oo dhan iyada oo la adeegsanayo qaybo kala duwan oo aan kala shaandheyn karno. Fursadda lagu kala shaandheyn karo qayb ahaan iyo waddan ahaanba waxaa la siiyaa dadka isticmaala xilligan.
Hal-abuurnimo kale oo xusid mudan ayaa ah iyada oo la galayo xisaabaadkaaga Opera, waxaan awoodi doonnaa inaan isku waafajino miisaska desktop-ka iyo noocyada moobiilkaba Sidan oo kale, waxaan ku sii wadi karnaa shaqada aan ku qabanno aaladda moobilkeena inta aan safarka ku jirno, meeshii aan ka tagnay markii aan nimaadno kombiyuutarka.
Marka laga reebo dhammaan astaamahan cusub, Opera, oo leh taageero mawduuc ah, taageero-ku-xirid iyo dhammaan astaamaha caadiga ah ee daalacayaasha kale, waxay umuuqataa inay sare uqaaday heerka xoogaa.
Intaa waxaa dheer, iyada oo ay uga mahadcelineyso qaabkeeda loo yaqaan Turbo Mode, Opera, oo dardar gelineysa daalacashadaada internetka, sidoo kale waa mid aad looga fiirsado processor-ka iyo isticmaalka xusuusta.
aad u dhakhso badan
Taageerada lagu daro waa yar tahay
Cabirka Faylka: 70.40 MB
Horumar: Opera Software